Ndinokwanisa here kukurumidza kuwedzera Amazon mazita angu ezvinyorwa zvinongirira pandiri pane zvakanyanya kutsvaga zvinhu?
Kana iwe uchida kuzvigadzirisa kuti ubudirire, unofanira kuisa nekugadzirisa Amazon yako tsanangudzo yezvakakosha keywords (i. e. , iyo isina chinhu chinyorwa uye yakareba-muswe kuenzanisa iyo inoshandiswa pakutsvaga kwechigadzirwa kakawanda). Asi sei kuti uwane kodzero dzekodzero uye kukwanisa kuverenga Amazon zvakanakisisa nzira inoita? Chinhu chacho ndechokuti kufanana neSearch Engine Optimization (SEO), kuwedzera Amazon yako tsananguro iwe unofanirwa kusarudza mazwi ekutsvaga kutsvaga kutsvaga (i - cheap windows dedicated hosting. e. , guru tsvakurudzo yakawanda), maererano nehutano hwakakwana hwe keyword competition (i. e. , zvishoma nyore kuenzanisa). Ndicho chikonzero zvisati zvaitika iwe uchafanira kusarudza rakarurama keyword tool. Uye pasi ndichaenda kuzokuratidza mamwe mazano aunoita kuti uwedzere Amazon zvinyorwa zvekodzero dzekodzero uye uchishandisa kodzero yakarurama nehutano hwakaratidza. Saka, ngatifungei!
Tanga neGoogle Keyword Planner
Zvikuru, izvi zvinonyanya kushandiswa kutsvakurudza zvombo zvakanaka-kuziva nezvose zvinodzidza SEOs zvinogona kukubatsira zvakawanda kuti uwedzere Amazon listing for the right keywords. Kuti zvive zvakanyatsojeka, ndinokurudzira kushandisa Google's Keyword Planner pane chimwe chinhu-kungova nemufananidzo wakawanda wechitsva chekugadzirwa kwemashoko mazwi uye misoro yakareba yekutsvaga mitsara. Nenzira iyo, iwe uchakwanisa kunzwisisa zvose zvenyika maitiro ekushandiswa kwavo - kwete chete kuAmazon pachake, asi kuburikidza nedzimwe misika yakadai, seBay, Walmart, Alibaba store, nezvimwe.
Ongorora Amazon Listing Kushandisa Professional Tool
Kana wawana mufananidzo mukuru wepfungwa yako huru mazwi, inguva yekuvaidza mukuita. Ndinoreva pano iwe uchafanira kusarudza yakanaka keyword research tool zvakananga kuenderana nekunaka Amazon listing. Pakati pevamwe, ini ndinogona kukurudzira kushandisa zvinotevera - KeywordTool. io uye JungleScout. Ndakaedza zvose izvi kuti ndigone kuwedzera ma Amazon angu mazita ekutsvaga zvinyorwa zvinyorwa. Pasi apa ngationei pfupiso pfupi kune umwe neumwe wavo.
Icho chinhu chikuru chekuenderera mberi nemamwe makuru makuru mazwi. Zvakafanana neGoogle Keyword Planner, zvose zvaunoda ndezvokuti uise chinangwa chako chinyorwa - uye uwane rubatsiro rwemashoko makuru anotsvaga anoshandiswa nevatengi vanogara vachitarisa chinhu chimwechete kana chigadzirwa. Chii chinopfuura - KeywordTool. io yakaratidzwa kuva yakanyatsonaka, kunyanya kana iyo inosvika pakutsvaga yakavimbiswa kwenguva yakareba mutsara wegwaro rinosanganiswa. Yeuka, sarudzo yeAngoc autocomplete haigoni kukubatsira nguva dzose nemashoko aya, ndicho chikonzero kushandisa iyi zvakananga tailored keyword tsvakurudzo inogona kuva yechokwadi ruponeso kune vanotanga vatengesi vese kuAmazon.
Uye pano tava kusvika pakupedzisira - chinhu ndechokuti hapana Keyword Planner, kana KeywordTool inonyatsobatsira kunzwisisa zviri pachena chinhu chakakosha kupfuura uko - chaizvoizvo mazwi makuru zvinowanzoita kuti iwe uwedzere kutengesa kuAmazon. Ndicho chikonzero ini ndinokurudzira kushandisa JungleScout kuti ndizive kuti kukunde sei kune rimwe divi rinoshandiswa, kana kutaura kwenguva refu musingave. Kana iwe unogonawo kushandisa izvo chete nokuda kwezvinyorwa. Pakupedzisira, kuti uite kupedzisira kwekupedzisira kune rimwe nerimwe rinogona kuvimbisa shoko rinovimbiswa uye unofunga kuti chii chinofanira kunge chinokunda-kukwanisa kuwedzera Amazon yako zvinyorwa, kana kwete zvachose.